Kooxda Manchester United oo doonaysa Edinson Cavani… (Miyaa la heli karaa suuqa bishan Janaayo?) - Hargeele - Wararka Somali State
January 16, 2020 57
(Manchester) 16 Jan 2020. Manchester United ayaa dalab ka gudbin doonta Weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Edison Cavani inta lagu gudo jiran suuqa bishan Janaayo.
Weeraryahanka Waddanka Uruguay ayaa beeca xorta ah lagu heli karaa suuqa xagaaga ee soo aaddan.
Man United ayaa ku guul-darreysatay in RB Salzburg ay ka soo qaatan Erlin Haaland kaas oo go’aansaday in uu ku biiro Kooxda Borussia Dortmund.
Inkastoo ay ahmiyada sii nayaan khad dhexe, islamarkaana ay safkeeda dhaawac kaga maqan yihiin Paul Pogba iyo Scott Mc Tominay, ayna wada xaajood kula jiraan kubbad-sameeyaha Sporting Lisbon ee Bruno Fernandez iyo Marcos Llorente oo Atletico ah ayaa kooxdu waxa ay tahay waqtigaan mid danaynaysa adeegga weeraryahan.
Red Devils ayaa doonaysay Mario Mandzukic si ay badal kaga dhigaan booskii uu banneeyey Romelu Lukaku, kaasoo suuqii xagaaga ka tagay Kooxda, hase ahaate waa ay ku fashilantay.
Laakiin Wargeyska “MEN Sports” ayaa fahansan in Cavani uusan PSG ka tagi doonin suuqa bishan Janaayo.
Si kastaba ha noqontee, Kooxda PSG ayaa lacagta ay Cavani ku fasaxi karo lagu sheegay 30 milyan oo gini.
Wakiillo ka socda Kooxda Juventus oo daawaday saddex ka mid ah xiddigaha Liverpool iyo Tottenham kulankii ka dhacay Anfield